Sikne Thalo 7:35 PM0Comments
पाठ : २) यात्रा सुरु गरौँ
कवि दुबसु क्षेत्रीद्धारा लिखित कवितामा कविले विभाजित भएर होइन, एकताबद्ध भएर समयको माग अनुसार अघि बढ्नुपर्ने महत्त्वपुर्ण विचारलाई प्रस्तुत गरिएको छ । कवितामा सम्पुर्ण जातजाती, धर्म, संकृति भएको नेपालीहरुको एकताबद्ध भई अघि बढ्न आह्वान गरिएको छ । आज सबै जात, धर्म, संस्कृति मान्ने नेपालीहरु विभाजित भइ आपसमा वैपनस्यता साँध्नुको सटट पुर्खाको आदर्शलाई पछ्याउँदै र सहधर्मको यात्रा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।
देशलाई अग्रगमनतर्फ डो¥याउन र नव निर्माणको यात्रा प्रारम्भ गर्न समय एकदमै अनुकूल बनेकाले कविले आफ्ना सकारात्मक सन्देशहरु प्रवाहित गरेको छन् ।कठोर यात्रा पार गरी आज हाम्रो देश नेपाल नयाँ युगमा परिवर्तन भएको छ । नेपालीहरुले सजाएका मुल सपनाहरु शान्ति र समृद्धि हुन् । यसका लागि सबै नेपालीहरुले एकताबद्ध भई सह अस्तित्व, सहकार्य, सहिष्णुता र नव निर्माणको यात्रा तयार गरी नेपालीहरुका सपना साकार हुन सक्ने विश्वास कविले व्यक्त गरेका छन् । कविताले धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, जात, जाति, भाषा भाषी सम्बन्धी सकारात्मक सन्देशहरु दिन खोजेको छ ।
पहाड, हिमाल वा मधेसको नारा दिएर विखण्डनतिर जानुको सट्टा आस्थाको केन्द्र मानिएको जानकी धामको माटाको चन्दन लगाउदै र तामाङ वा शेर्पा जातिको सेले नाचसँगैं सहिष्णुताको यात्रा सुरु गर्न पनि कविले आह्वान गरेका छन् । कवितामा प्राकृतिक, सांकृतिक आदि विम्बका माध्यमबाट नेपालीहरु अनेक जात, जाति, धर्म, क्षेत्र आदिका आधारमा विभाजित नभई सह अस्तित्व, सहमति, स्वावलम्बन, सहिष्णुता, सहकार्य, नव निर्माण, सहधर्मको यात्रा सुरु गर्नका लागि आह्वान गरेका छन् ।
कविताका गद्यांशको व्याख्या
नेपाल लामो समयसम्म राजनीतिक, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय तथा वर्गीय द्वन्द्वमा फस्यो । नेपालको इतिहासमा यो समयलाई सङ्कटपूर्ण समयका रूपमा लिइन्छ । मुलुकले हजारौं नागरिकहरू गुमायो । कयौँ अङ्गभङ्ग भए । विकासका पूर्वाधारहरू तहसनहस भए । तथापि जनताको बलिदानीबाट अहिले लोकतन्त्रको स्थापना भएको छ । मुलुकले जनताको संविधान पाएको छ । यो सन्दर्भ घाम उदाएको र बिहान भएको पक्षसँग सम्बन्धित छ । यो सुखद् समयमा हामीले आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ । सबै नेपाली समान र अधिकार सम्पन्न भएकाले समुन्नतिको यात्रा सुरु गर्ने उपयुक्त अवसर आएको छ । अब हामी नेपालीले आत्मविश्वासका साथ काम गरी उज्यालो छर्नुपर्छ । शान्ति, सद्भाव र एकतालाई सदैव जोड दिनुपर्छ । शिशिरको कठिन अवस्था पार गरी वसन्तजस्तो सुन्दर मौसम पाएकाले जागरणको गीत गाउँदै एकताबद्ध भएर फकेका फूलहरूलाई मालामा उन्नुपर्ने समय आएको छ ।
कवितामा सबै नेपालीका धार्मिक, सांस्कृतिक पर्वहरू नेपालको सम्पत्ति भएको अभिव्यक्ति भएको छ । गुरुड, मगर आदि जातिले सोरठी मनाउँछन् । थारू जातिमा माघीको न्वांगी खाने परम्परा छ । हिन्दुले विवाह पञ्चमी र मधेसी समुदायले छठ मनाउँछन् । तामाङ र शेर्पाका ल्होसार, सुदूरपश्चिम क्षेत्रको गौरा आदि पर्वको सांस्कृतिक सम्बोधनले समावेशिताको सुन्दर नमुना प्रस्तुत गरेको छ । यसले नेपालीका धार्मिक र सांस्कृतिक विविधताललाई जीवन्त बनाएको छ । मुलुकको जुनसुकै स्थानमा बसेर जस्तोसुकै धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा बोके पनि सबै जनता समान भएका छन् । सबै नेपाली एकआपसमा मिलेर बन्धुत्वको गीत गाउन आह्वान गरिएको छ । हामीले अब स्वावलम्बनको यात्रा सुरु गर्ने समय भएको छ । आकाश छुने अग्ला हिमाललाई साक्षी राखेर धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, भाषिक, वर्गीय जस्ता सम्पूर्ण विभेदलाई अन्त्य गर्दै सबै नेपालीलाई परिवर्तनका लागि आपसमा सहकार्य गर्न आह्वान गरिएको छ । हामीले विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै राष्ट्रको परिवर्तन, विकासका पूर्वाधार, समृद्धि आदि क्षेत्रमा नवनिर्माण गर्नुपर्छ। यस कममा हामीले शान्ति, सद्भाव र सहअस्तित्वलाई कदापि भुल्नुहुँदैन।
समयको यस कालखण्डसम्म आइपुग्दा जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग आदिका आधारमा सबै | नेपाली समान भएको कुरा हामीले बुझिसकेका छौं । यी समानताहरू केवल नारामा मात्र सीमित छैनन् । समानतालाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न संविधान र ऐन कानुनहरू बनिसकेका छन् । अब हामी नेपालीको चेतनास्तर माथि उठेको छ । हरेक नेपालीसँग आस्थाका विभिन्न विचार हुन सक्छन् । तर यी फरक विचारलाई समेट्दै सहधर्म अर्थात् समानताको यात्रा सुरु गर्ने उपयुक्त समय भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्रको एकीकरण अभियानको इतिहासलाई सम्झदै काठमाडौंबाट शिक्षा, विकास, समानता, परिवर्तन, समृद्धि आदिको नवएकता थालनी गर्न आह्वान गरिएको छ ।
हामी नेपालीले अशिक्षा, विभेद, शोषण र निरङ्कुश शासन जस्ता निस्पट्ट अन्धकारलाई पार गरेका छौँ । हजारौं नेपालीको बलिदानीबाट मुलुकमा लोकतन्त्रको उज्यालो बिहानी ल्याएका छौँ । नेपाली नेपालीमा कुनै पनि किसिमको विभेद हुन सक्दैन । सबैले समान अवसर पाएका छौँ । बदलिँदो परिवेशमा नयाँ जोसजाँगरका साथ परिवर्तनशील समयअनुसारको नयाँ जीवन सुरु गर्न आग्रह गरिएको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानमा सबै नेपाली सकिय हुनुपर्ने बेला भएको छ । शान्ति र समृद्धिका सुन्दर सपनाहरूलाई राष्ट्रको नवनिर्माणमा कियाशील बनाउनुपर्छ ।
उत्तर - यात्रा प्रारम्भ गर्न अनुकूल वातावरण बनेको छ । कठोर समयको अन्त्य भएकाले आस्थाको टुकी बाली अघि बढ्नुपर्ने र चारैतिर उज्यालो छर्नुपर्ने कुरामा कविले जोड दिएको छन् । वातावरण बडो उत्साह जनक भएकाले गीत गुन्जाउँदै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्ने कुरा पहिलो अनुच्छेदको आशय हो ।
अनेक जात जाति, धर्म, संस्कृति आदिलाई मान्नेहरुका बिच बन्धुत्का भावना जागृत गराउँदै सहकार्य गर्दै नव निर्माणको यात्रा सुरु गर्न कवि आह्वान गर्छन । सांस्कृतिक उत्सवमा वातावरणमा रोकिएको हाम्रो यात्रालाई तिनकोटी नेपालीहरु मिलेर अघि बढ्न आह्वान गर्नु दोस्रो गद्यांशको आशय हो ।
नेपालीहरु आआफ्ना धर्म, संस्कृति र परम्पराप्रति आस्था राख्दछन् । उनीहरुले आफ्नो आस्थाका केन्द्रका रुपमा रहेका गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद र गिर्जाघरको प्राङ्गणबाट सहधर्मको यात्रा प्रारम्भ गरेका थिए । खास गरी नेपालको एकीकरणको अभियानताका नेपालीहरुले उपत्यकास्थित काष्ठ मण्डपको देव बाट धिमे बाजा बजाउँदै जुन उत्साह र एकता प्रदर्शन गरेको थिए्, यसैलाई वर्तमान समयमा अनुकूल वातावरण सिर्जना भएकाले विश्वकै लागि नमुनायोग्य यात्रा सुरु गर्न आह्वान गर्नु तसा्रे गद्यांशको आशय हो ।
नेपालीहरुले कठोर समय पार गरी आजको विशिष्ट वातावणमा प्रवेश गरेका छन् । नयाँ जीवन सुरु गर्ने प्रशस्त मार्गहरु सिर्जना भएका छन् । हिजो अनेक परिस्थितिका कारण थाकेर आफ्नो यात्रा रोक्न बाध्य भएको भए पनि आज अनुकूल वातावरण भएकाले त्यहीँबाट यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने कविको भनाई छ । अब नेपालीले शान्ति र समृधिका लागि नयाँ यात्रा सुरु गर्नु आवश्यक छ भन्नु नै चौथो गद्यांशको आशय हो ।
नाम : दुवसु क्षेत्री
वास्तविक नाम : दुर्गाबहादुर क्षेत्री
जन्म : वि. सं. २०२१ साउन २१ गते
जन्मस्थान : खुदुनाबारी, झापा
पिताः मानबहादुर सुवेदी
माता : वसुन्धरादेवी सुवेदी
शिक्षा : विद्यावारिधि
(क) कस्तो यात्रा सुरु गर्नका लागि कविले आह्वान गरेका छन् ?
उत्तर : विभिन्न धर्म, संस्कृति, परम्परा, भाषा भएका नेपाली एकजुट हुनुपर्छ । सबै नेपाली समान छौं र सबैका समान अधिकार छन् भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ । नयाँ जोसजाँगरका साथ हरेक नेपालीले आपसमा सहकार्य गरी स्वावलम्बनको बाटोमा हिँड्नुपर्छ । एकताको सूत्रमा बाँधिएर नवएकताको यात्रामा लाग्नुपर्छ । शान्ति र समृद्धिका सपनालाई मुलुकको नवनिर्माणमा कियाशील बनाउनुपर्ने यात्रा सुरु गर्नका लागि कविले आह्वान गरेका छन् ।
(ख) नेपाल बहुसांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश हो भन्ने कथनलाई कविताका आधारमा स्पष्ट पार्नुहोस्।
उत्तर : कवितामा गुरुड, मगर आदि जातिका सोरठी र रोदीजस्ता सांस्कृतिक परम्पराको चर्चा गरिएको छ । थारू जातिको माघी र हिन्दुहरूको विवाह पञ्चमीको पनि कवितामा सन्दर्भ आएको छ । तामाङ सेलो तथा शेर्पा, गुरुङ, तामाङ जातिको नयाँ वर्ष ल्होसार पर्वलाई कवितामा स्थान दिइएको छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा प्रचलित गौरा पर्व र देउडा नाचगानलाई समेत कवितामा समेटिएको छ । अतः कवितामा नेपालका विभिन्न जातजातिका मौलिक तथा सांस्कृतिक परम्परा उल्लेख गरिएका कारण नेपाल बहुसांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश हो भन्न सकिन्छ।
(क) राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौं त्यहींबाट जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ।
उत्तर= राष्ट्र नवनिर्माणको.....................सजाएका थियौं ।
सप्रसङ्ग व्याख्याका लागि दिइएको प्रस्तुत कवितांश नेपाली किताब कक्षा ९ को 'यात्रा सुरु गरौं शीर्षकको कविताबाट साभार गरिएको हो । यस कविताका रचनाकार कवि दुबसु क्षेत्री (वि.सं. २०२१) हुन् । यो गद्यांशले अब नेपालीहरूले शिक्षा, विकास, परिवर्तन र समृद्धिको नवनिर्माणमा लाग्ने समय भएको सन्दर्भलाई सङ्केत गरेको छ । मुलुक लोकतन्त्रको नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेकाले सोहीअनुसार हामी नेपालीले शान्ति र समृद्धिका योजना बनाएर राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रामा लाग्नुपर्ने बेला भएको छ भन्ने प्रसङ्ग यस कवितांशको मुख्य भाव हो।
क्रमश :.................यस्तै प्रश्न उत्तर र नोट हेर्नुहोस् यहाँबाट
हामीले कक्षा ९ नेपालीको Guide तयार पारेका छौं । निशुल्क हेर्न सकिन्छ । कुनै पैसा तिर्नु पर्दैन ।विद्यार्थी र शिक्षक दुवैका लागि उपयोगी छ । मात्र एउटा Mobile app भए पुग्छ ।
कक्षा ९ नेपालीको सम्पूर्ण पाठको लागि सम्पूर्ण सामग्री हाम्रो Mobile Application मा राखिएको छ ..निशुल्क पढ्न सक्नुहुन्छ /यहाँ क्लिक गरेर Download गर्नुहोस् आजै कुनै पैसा लाग्दैन ।